လူအများစု မှားနေကြတဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ အလွဲလေးများ - Hello Sayarwon
လူတော်တော်များများ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ နိစ္စဓူဝ ကိစ္စတွေထဲမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်လျော်တဲ့ အမှားများစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီလို အမှားတွေကို ကိုယ်တိုင်က ပိုလှချင်လို့လုပ်ဆောင်လိုက်ပေမဲ့ နည်းစနစ်မမှန်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်တာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။ အခု ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ Hello ဆရာဝန် ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အမျိုးသမီးတွေသာ မက အမျိုးသားတွေပါ လုပ်မိနေနိုင်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ အလွဲလေးများကို
ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်လေးတွေကို လုပ်မိနေတယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး သတိထားပြီးပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း လျော်ညီတဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဆံပင်ခြောက်သွေ့လျက်နဲ့ ရေကူးခြင်း။
ရေကူးကန်တွေမှာ ရေကို သန့်ရှင်းစေရန်အတွက်ထည့်ထားရတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေရှိပြီး ဒီဓါတု ပစ္စည်းဟာ အရောင်ဖျော့နေတဲ့ ဆံပင်ကို အစိမ်းရောင် အဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရေကူးကန်တွေမှာ ရေကူးမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ဆံပင်ခြောက်ခြောက်နဲ့ ရေမကူးသင့်ပါဘူး။ ဆံပင်ကို ခြောက်သွေ့နေတဲ့ရေမြုပ်တစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဆံပင်နဲ့ ရေကူးကန်ထဲ ဆင်းကူးမယ် ဆိုရင် ဆံပင်ဟာရေမြုပ်လိုမျိုး ရေကူးကန်ထဲက ဓါတု ပစ္စည်းတွေကို စုပ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေကူးမယ်ဆိုရင် ဆံပင်ကို ဘုံဘိုင်မှ ရေနဲ့ အရင်ဆေးကြောထားမယ်ဆိုရင်တော့ ရေကူးကန်ထဲက ဓါတု ပစ္စည်းတွေဟာ ဆံပင်ထဲကို သိပ်စိမ့်ဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ရေကူးပြီးပြီဆိုရင်လည်း ဆံပင်ကို ရေသန့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်အမြန်ဆုံးဆေးကြောသင့်ပါတယ်။
၂။ ခေါင်းလျှော်ရည် နည်းနည်းသုံးတာကောင်းသလား၊ များများသုံးတာကောင်းသလား။
ခေါင်းလျှော်ရည်တွေဟာ သင့်ဦးရေမှ ထွက်တဲ့ သဘာဝ အဆီတွေကို ရှင်းပေးပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်အရမ်းသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ဆံသားတွေက အရောင်မွဲပြီး ခြောက်သွေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည် ပမာဏ ဘယ်လောက်များများ သုံးသင့်လဲဆိုတာ သင့်ရဲ့ ဆံပင်အမျိုးအစားနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဆံသားစင်းပြီးအုံထူတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာကျတော့ ဦးရေမှ အဆီနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ပိုများနေနိုင်တာကြောင့် နေ့တိုင်း ခေါင်းလျှော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ၂ ရက်၊ ၃ ရက်ကြာမှ ခေါင်းလျှော်သင့်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဆံသားထူတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ကတော့ ခေါင်းလျှော်ချိန် တစ်ခါနဲ့ တစ်ခါအကြား ရက်အနည်းငယ်ကနေ တစ်ပတ်ခန့် အထိခြားထားသင့်ပြီး ဆံသားပါးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ တစ်လမှာ ၂ ခါ လောက်သာ လျှော်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုလျှော်ရမလဲဆိုတာကို သင့်ရဲ့ ဆံသားအလှဖန်တီးပေးသူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
၃။ Hair Conditioner ကို မသုံးခြင်း။
Hair Conditioner ကိုသုံးလိုက်ရင် ဆံပင်ပိုစေးကပ်နေမှာစိုးတာကြောင့်၊ ဒါမှမဟုတ် အချိန် မရှိတာကြောင့် မသုံးမိတဲ့ အချိန်တွေ ရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ Hair Conditioner မသုံးဘူးဆိုရင် ဆံသားတွေဟာ မွဲခြောက်ခြောက် ဖြစ်လာပြီး ခြောက်ကပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဆံမျှင်တွေ ကျန်းမာပြီး နူးညံနေဖို့ အတွက် ခေါင်းလျှော်တိုင်းမှာ Hair Conditioner ကို သုံးသင့်ပါတယ်။ သုံးတဲ့ အခါကျရင်လည်း ဆံသားအဖျားနား ( အရင်းနား မဟုတ်ပါ) ကို သေချာ လက်နဲ့လိမ်းကျံပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ နားဖာကလော်တံ၊ ဂွမ်းတံများ သုံးခြင်း။
နားဖာကလော်တံ၊ ဂွမ်းတံတွေနဲ့ နားဖာကလော်ခြင်းက ခံစားချက် ကောင်းရင်ကောင်းစေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဂွမ်းတံတွေဟာ နားဖာချေးတွေကို အတွင်းထဲသို့သာ ပိုရောက်သွားစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပိုဆိုးတာက သင်နားကြားအောင်လို့ ကူညီပေးနေတဲ့ အရိုးသေးသေးလေးတွေနဲ့ နားစည်ကို ပိုပြီး ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နားဖာချေးတွေကို ဘယ်လို ရှင်းလင်းရမလဲ။
တကယ်တမ်းက နားဖာချေး ကလော်ဖို့အတွက် သင်ဘာမှ လုပ်စရာကို မလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က သူ့ဘာသာ ရှင်းလင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်နားထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတယ်လို့ ခံစားရမယ်၊ နားထောင်ရတာ ခက်ခဲလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့သွားရောက်တိုင်ပင်ပြီး နားဖာချေးကို အန္တရာယ် ကင်းကင်း ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရမလဲဆိုတာကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
၅။ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး အသုံးပြုခြင်း။
ချွေးနံပျောက်ဆေးတွေက အနံ့အသက်ကို ဖုံးပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ရဲ့ ချိုင်းကြား ချွေးထွက်လွန်ပြီး စေးကပ်တဲ့ အထိတောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သင်သုံးဖို့ လိုတာက ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးမဟုတ်ဘဲ ချွေးတိတ်ဆေးသုံးဖို့ လိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချွေးတိတ်ဆေးတွေဟာ သင့်ရဲ့ ချွေးဂလင်းတွေကို ပိတ်ဆို့ပြီး ချွေးတိတ်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချွေးတိတ်ဆေးသုံးမယ်ဆိုရင် Instruction တွေကိုအရင် ဖတ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော ချွေးတိတ်ဆေးတွေက ညဘက်မှာ သုံးရပြီး မနက်မှာ အရေပြားခြောက်သွေ့နေတဲ့အချိန် ထပ်သုံးရတဲ့ ဆေးမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖဝါးတွေလည်း လက်ဆီ အထွက်လွန်နေမယ်ဆိုရင် ချွေးတိတ်ဆေးတွေ ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၆။ ခြေထောက်ပိုပြီး လှစေရန် ပြုပြင်မှု (Pedicure) မလုပ်ခင် အမွှေးရိတ်ခြင်း။
လက်သည်း၊ ခြေသည်း ပညာရှင်ထံ အမွှေးထူနေတဲ့ ခြေထောက် သွားမပြချင်တဲ့ အတွက် Pedicure မလုပ်ခင်မှာ အမျိုးသမီးတွေ အမွှေးရိတ်မိတဲ့ အချိန်တွေရှိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အမွှေးရိတ်ပြီးတဲ့အခါ အရေပြားပေါ်က သေးငယ်တဲ့ရှနာ သေးသေးလေးတွေက ဘတ်တီရီးယားတွေ ကူးစက်ခံရဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးဝင်ပေါက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွေကနေ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ဝင်လာပြီး ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Pedicure မလုပ်ခင် ၂၄ နာရီအတွင်း အမွှေးရိတ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Pedicure လုပ်ချိန်မှာလည်း လက်သည်းခြေသည်းပညာရှင်ကို သင့်ရဲ့ Cuticles လို့ခေါ်တဲ့ ခြေသည်း၊ လက်သည်းရင်းရှိ အရေမာအရစ် ကို လှီးဖြတ်တာမျိုး မလုပ်ဖို့ ကြိုပြောပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလို လှီးဖြတ်ရာကနေ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ဝင်ရောက်နိုင်လို့ပါ။
၇။ ဘလိတ်ဓါး မလဲခြင်း။
ဘလိတ်ဓါးတစ်ခုတည်းကို မကြာခဏ သုံးနေမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ အမွှေးရိတ်ရတာ ပိုခက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ အရေပြားကို ရှနာ အသေးစားလေးတွေ ထြစ်စေနိုင်ပြီး အနာတွေ၊ နီရမ်းရောင်ရမ်းနာတွေ၊ ယားယံမှုတွေသာမက ကူးစက်ရောဂါတွေကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၅ ကြိမ်မှ ၆ ကြိမ်လောက် ဘလိတ်ဓါးသုံးပြီးတဲ့အခါတိုင်း ဘလိတ်ဓါးတွေကို အသစ်လဲသင့်ပါတယ်။
၈။ ရေနွေးငွေ့ရေချိုးခန်းတွေမှာ အချိန်ကြာကြာပိုနေခြင်း။
ရေနွေးတွေဟာ သင့်ရဲ့ အရေပြားတွေကို ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ သင့်မှာ နှင်းခူနာ ရှိမယ်ဆိုရင်
အနာကို ပိုဆိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေနွေငွ့နဲ့ ရေချိုးတဲ့အခါ အကြာကြီးစိမ်မနေပဲ ခပ်မြန်မြန် ချိုးပေးပါ။
၉။ မျက်နှာကို ကြမ်းတမ်းစွာ သန့်ရှင်းခြင်း။
မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို ရှင်းလင်းဖို့အတွက် မျက်နှာကို သဘတ်နဲ့ အားပြင်းပြင်း သုတ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ သင့် မျက်မှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ အတွက်
အားပျော့တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးတွေနဲ့ လက်ချောင်းလေးများကို သုံးပြီး သန့်ရှင်းပေးရုံပါပဲ။ မျက်နှာကို သန့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်နေ့ တစ်ခါကနေ နှစ်ခါအထိ ကြက်သီးနွေးရေ သို့မဟုတ် ရေအေးနဲ့သာ သန့်ရှင်းသင့်ပါတယ်။ မျက်နှာ သစ်ဆေးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို သေချာစစ်ဆေးသင့်ပြီး အယ်ကိုဟော်လ် နဲ့ ဓါတုပစ္စည်း အပြင်းစားတွေပါဝင်တဲ့ မျက်နှာ သစ်ဆေးတွေကို မသုံးသင့်ပါဘူး။
၁၀။ အရေပြား လှပရေး ပစ္စည်းအများအပြားသုံးထားခြင်း။
မျက်နှာသစ်ဆေး အပျော့စားနဲ့ မျက်နှာကို ဆေးကြောပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ အရေပြားရောဂါ အထူးကု တွေကတော့ အလှဆီနဲ့ နေရောင်ကာ ခရင်မ်တွေလောက်ပဲ ထပ်လိမ်းပေးဖို့လိုပါတော့တယ် လို့ဆိုထားပါတယ်။ တစ်ခြားသော အလှကုန်ပစ္စည်းတွေက ဈေးကြီးတဲ့အပြင် တကယ်အကျိုးရှိလား၊ မရှိလားဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ Toner တွေကလည်းအရေပြားကို ခြောက်သွေ့၊ ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံအတွက်ဆိုရင်တော့ salicylic acid နဲ့ benzoyl peroxide ပစ္စည်းတွေ ပါတဲ့ ဝက်ခြံပျောက်ဆေးတွေကို တွဲမသုံးပါနဲ့။ ဒီလို တွဲသုံးခြင်းက အရေပြားကို ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်မျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံတွေက ဆေးဆိုင်က ဆေးတွေနဲ့ မပျောက်ဘူးဆိုရင် အရေပြားဆရာဝန်ထံသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
၁၁။ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ နူးညံတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆပ်ပြာဖြင့်တိုက်ခြင်း။
အမျိုးသမီးအင်္ဂါ နမိတ်ဝ (vulva) နဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း (vagina) တို့ဟာ အင်မတန် နူးညံ့တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနံ့အသက်ထည့်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာတွေနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတွေပါဝင်တဲ့ ဆပ်ပြာအပြင်းစားတွေဟာ ထို ဧရိယာ တစ်ဝိုက်ကို ကျန်းမာအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားပမာဏကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အမျိုးသမီးအင်္ဂါအတွင်း သန့်ရှင်းရတဲ့ ဆေးရည်တွေ၊ ပိုးသတ်ဆေး ပါဝင်တဲ့ အဝတ်စတွေနဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးတွေ လည်း ဘတ်တီးရီးယားပမာဏကို မညီမမျှ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထိုဧရိယာ တစ်ဝိုက်ကို သန့်ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်ဖို့လိုတာက အနံ့မပါတဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ ထိုဧရိယာ တစ်ဝိုက်ကို ပုံမှန် ဆေးကြောပေးရုံပါပဲ။
၁၂။ အစားအစာပြီးပြီးခြင်း သွားတိုက်ခြင်း။
ကော်ဖီတွေ၊ ဆိုဒါတွေ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အက်ဆစ်ဓါတ်နဲ့ သကြားဓါတ်တွေက သွားရဲ့ အပေါ်ယံ အလွှာ ဖြစ်တဲ့ အီနာမယ်(Enamel) လို့ ခေါ်တဲ့ သွားအပေါ်ယံက ကြွေလွှာပါးကို ပျက်ဆီးစေနိုင်တယ် ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကော်ဖီတွေ၊ အအေးတွေ၊ အစားအစာတွေ စားပြီးတိုင်း သွား မတိုက်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆို အက်ဆစ်ဓါတ်များတဲ့ အရည်တွေ၊ အစားအစာတွေ စားသုံးပြီးတိုင်း သွားတိုက်မယ်ဆိုရင် အားနည်းတဲ့ အီနာမယ်(Enamel) ကြွေလွှာတွေကို ပျက်စီးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားကျန်းမာရေးအတွက် ဂရုစိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ရေနဲ့သာ ပလုတ်ကျင်းပါ။ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး တစ်နာရီခန့်စောင့်ပြီးတော့မှ သွားတိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ မစားခင်သွားတိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၁၃။ ဝိုင်သောက်ချိန်မှာ ရေမသောက်ခြင်း။
ဝိုင်နီဟာ သွားကိုအရောင်စွန်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝိုင်ဖြူတွေကလည်း အက်ဆစ်နဲ့ Tannins လို့ခေါ်တဲ့ ရေထဲပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဝိုင်အရက်တွေက သင့်ရဲ့ အီနာမယ်(Enamel) ကြွေလွှာ ကို ပျက်စီးစေပြီး အရောင်စွန်းစေနိုင်ပါတယ်။ အယ်ကိုဟောလ်တွေဟာ ပါးစပ်ကို ခြောက်သွေ့စေပြီး အက်ဆစ်နဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ရှင်းထုတ်ဖို့ အတွက် တံတွေးနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားတွေ အရောင်စွန်းခြင်းနဲ့ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် သင်ဝိုင်အရက်တွေ သောက်သုံးပြီးတိုင်း ရေနဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Accessed (21. June. 2018)